बुढो देखाउने फेसएप प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसकारण रहनुहोस् सावधान ! - Khabar Break | Khabar Break
बुढो देखाउने फेसएप प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसकारण रहनुहोस् सावधान !
साउन ३- संसारभरी फेसएपको धूम मच्चिएको छ । यो एपबाट आफ्नो बुढेशकालको सम्भावित तस्बिर मानिसहरु हेरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फेसएपको तस्बिर अन्धाधुन्द पोष्ट भइरहेका छन् ।
तर यो चिन्ता फेसएपले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । यो एप सेन्ट पीटर्सबर्ग स्थित कम्पनी वायरलेस लैबको हो । यो कम्पनीको दाबी छ कि मानिसहरुको तस्बिर स्थायी रूपमा स्टोर गरिँदैन ।